COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို ရှေ့တန်းမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သော ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံအမျိုးသားနေ့တွင် ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာ တည်ခင်းခြင်းအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် ယနေ့၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy က "COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို ရှေ့တန်းမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံအမျိုးသားနေ့တွင် ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာ တည်ခင်းခြင်းအခမ်းအနား" သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy က ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားရာတွင် -
• ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုများအား ယခုလက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊
• ထိုသို့ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံးက အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများအပေါ် ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ အမျိုးသားနေ့တွင် ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာတည်ခင်းခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် (၁၉၄၈) ခုနှစ်မှ စ၍ (၇၂) နှစ်တာကာလ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော သံတမန်ဆက်ဆံရေးရှိပြီး ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိပါကြောင်း၊
• ထိုသို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အနာဂတ်ကာလတွင် တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• မိမိတို့အနေဖြင့် ဤသို့သော နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဖြင့် တူညီသော စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲဖြစ်သည့် COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
• လက်ရှိ၌ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် COVID-19 အား အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သော်လည်း ပေါ့ဆ၍ မရပါကြောင်း၊
• ထိုသို့ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုများသည် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မိမိတို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ နှီးနွှယ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် စေတနာအလှူရှင်များ၏ပံ့ပိုးမှုသည် အရေးကြီးပါကြောင်း၊
• ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပံ့ပိုးမှုများအနေဖြင့် - ပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (French Development Agency (AFD)) က အသစ်ဖြစ်ပွားသည့် ကူးစက်ရောဂါများ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းစီမံချက် (ECOMORE project) လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊
• French Development Agency (AFD)၏ ချေးငွေနှင့် ထောက်ပံ့ငွေတို့ဖြင့် Institut Pasteur နှင့် Foundation Merieux တို့က အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) ၏ ဇီဝလုံခြုံမှုအဆင့် (၃) ဓာတ်ခွဲခန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦကို ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း အပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်များ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှု ဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး)၏ အဆောက်အဦပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊
• Institut Pasteur က လတ်တလောပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်မှုဖြင့် ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊
• Foundation Merieux က အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး)တို့တွင် ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါပိုး (HIV) ကောင်ရေစစ်ဆေးမှုစီမံချက် ကိုလည်းကောင်း ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊
• မိမိတို့ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ အဆင့်ဆင့်သော ဝန်ထမ်းများသည် (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၅) ရက်နေ့မှစ၍ COVID-19 ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနည်းဗျူဟာ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း၊ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ သံသယ/ စောင့်ကြည့်လက္ခဏာရှိသူများရှာဖွေခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း၊
ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာများအား သီးခြားထားရှိကုသမှုပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများအား ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• ထိုသို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့် ဗဟို၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ ဌာနခွဲ အားလုံးတို့မှ ဝန်ထမ်းများအားလုံးအား ဤကဲ့သို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံအမျိုးသားနေ့တွင် အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊
• မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းစွာဖြင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ဆက်လက်၍ပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါမောက္ခဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်၊ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy နှင့် Head of French Development Agency (AFD) Mrs. Marie Cecile Thirion တို့သည် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။